musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Tennis Vatambi Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeTennis Genius inonyanyozivikanwa nezita rezita rokuti "Momma Smash". Isu Serena Williams Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri / mamiriro ezvinhu uye vazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekutsamwa kwake kukuru mumatare etiyete. Zvisinei, vashomanana chete vanoona Serena William's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Murume Akasarudza Ramangwana reMwanasikana Wake.
Serena Jameka Williams akazvarwa musi we 26th waSeptember 1981 muSaginaw, Michigan, United States. Baby Serena (mifananidzo iri pasi apa nehanzvadzi yake Venus) akaberekerwa nababa vake, Richard Williams (fan fan of televised Tennis uyo akambomira pamba yezvokuchengetedza pachake) uye kuna amai vake, Oracene Price (mukoti panguva yakaberekerwa Serena).
Makore akawanda vasati vasvika Serena, baba vake Richard Williams (vanoratidzwa pasi apa) vakanga vafungidzira ramangwana rake mumutambo mushure mekutarisa mutsara weTV wakaona mutambi wemutambo achitora pamba mari yakawanda yekukunda mutambo.
Richard akazozvidzidzisa iyemutambo uye akanyora chirongwa chePC-page chaaifunga kuti chingakonzera ani zvake kubva pakuva asina ruzivo kune unyanzvi wemutambo wetennis.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Mwedzi yakatevera mushure meSerena akaberekwa, mhuri yake yakabva kune imwe nzvimbo yakasununguka yekuzvarwa kwake muSaginaw kuguta rakachengeteka reCompton muLos Angeles apo chisimba chaive chirevo chezuva rekuita Tennis mumamiriro okunze akaipa.
Kufamba kwakange kusingagadziriswi nekuderera kwemari kwakange kuchienderana nepfungwa yekusiyana yakashanda iyo mune mamwe mazwi zvinoreva kusiya imwe yenzvimbo yekunyaradza kune chinangwa choga chekugara nekugadzirisa.
Yaiva paCompton iyo Richard Williams aidzidzisa Serena zvidzidzo zveTennis mumatare ekutambisa tennis pakati pemamwe mhere mhere-mhere yekuputika mhepo dziri pedyo nemunharaunda.
Achirondedzera mamiriro ezvinhu akapoteredza matare umo Serena Williams akatanga kutamba tennis, mudzidzisi wavo wechidiki Macci anoyeuka kuti;
"Tinosvika kumatare, uye haisi klabhu yenyika. Ndiyo pcmymy park. Kune vakomana vari kutamba basketball, vanhu vakapfuura muuswa, girasi rakaputsika kumativi ose ematare, vanhu vanonwa doro. "
Kunyange zvakadaro, Serena akanga ari mudzidzi akakurumidza uye akaratidza kufambira mberi kwakakosha mumwedzi yake yekutanga yekudzidziswa, rubatsiro rwakaita kuti baba vake vatore danho rinotevera rakashinga mukutsvaka kwake kuita kuti ave nyanzvi yekutamba tennis.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Career Buildup
Serena akatanga kutora chikamu muJunior Tournaments kubva pazera remakore mana nehafu. Paaiva muJunior Tournament, Akadzidziswa nababa vake uye akaisa chimiro chinoshamisa chaakaona achikunda makumi mana nematanhatu emakwikwi makumi mana nemapfumbamwe akatevera akapinda mumakore mashanu.
Kubudirira kwaakaita mumitambo yeJunior hakuna kungoita kuti vanhu vazivikanwe munzvimbo yavo asi vakamuita kupupurira rudzi rwemadzinza iyo baba vake, Richard vakanga vasingafariri nezvekuziva kuti Serena aigona kuitika mumuviri uye mupfungwa zvakanyanya kupfurikidza akaenderera mberi mumitambo yeJunior inoratidzirwa nekusaziva uye kusarura nguva.
Iye, saka, akasiya Serena kunze kwemakwikwi uye akachengetedza mabasa emudzidzisi wemutambo we tennis, Rick Massi kudzidzisa Serena kumba.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Hazvina nguva refu Ko Coach Rick Massi aziva kuti Serena akanga ari nyeredzi pakugadzira uye akakoka mhuri yeWilliam kuFlorida uko yaitamba chikoro chetennis. Kutenda kuwanikwa kubva kubvumo yekugadzirisa zvipfeko zveSerna, mhuri yakanga isisina dambudziko rekuwana imba sezvo ivo vose vachangobva kuendeswa.
Kutama kwemhuri kuFlorida kwakave iyo inoita kuti Serena awedzere kukura sezvo iye aive nemutambo wake wekutanga wezvidzidzo panguva ye14, yakarongerwa #96 best tennis player munyika yose makore 16! mu 1998 yakasayira shoma ye $ 12 mamiriyoni anotarisana naPuma nguva pfupi mushure mekunge apedza chikoro kubva kuchikoro chesekondari !. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Serena Williams, kunyange zvazvo akavanzika pamusoro pehukama hwake nekuchengetedza hupenyu hwehupenyu hwake hwega, akave akazivikanwe kuti akaverenga vanhu vakawanda kunyanya kuburikidza nekukwira kwake kudivi. Zvikonzero zvehukama hwehukama hwake hunogona kunge husingatenderwi nehupenyu hwehupenyu hwake. Tinokuunzira humwe hukama hwahwo hwakanaka.
Pamusana pekufambidzana kwake, Serena Williams wePatrick Mouratoglou, iye zvino ari mudzidzisi weTennis. Drake Drake akabatanidzwawo mune rimwe rudo rukuru naSerena asi rwakanga ruchiri nguva pfupi. Zvimwe zviitiko zvinoshamisa zvinosanganisira American Film Director, Brett Ratner, uye American Basketballer Amar'e Stoudemire.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: muchato
Pashure pemwedzi ye15 yekufambidzana kwakavanzika, Serena Williams akabatanidzwa pachikwata che 10th chaDecember 2016 naAlexis Kerry Ohanian, muInternet muzvinabhizimusi weInternet uye mutengesi uyo akatsigira uye iye zvino ari sachigaro mukuru we social social Reddit.
Vakaroora 10 mwedzi mushure meNovember 16, 2017, kuNew Orleans.
Kubatana kwavo kunokomborerwa nemwana, Alexis Olympia Ohanian Jr., uyo akaberekwa musi waSeptember 1, 2017. Mwedzi yakareba pamberi peKutora kwaSerena.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Baba: Izvo zvibudirira uye kubudirira zvakanyorwa naWilliams madzimai, zvikurukuru Serena Williams anogona kunzi ainzi Richard Williams. Sezvo Baba uye mudzidzisi, Richard ane ruzivo rwemakore ake mu tennis akaona mikana muSerena, akamudzidzisa mutambo uye akavaka nheyo iyo yaizoita kuti ave nyika yepamusoro.
Amai: Kuwedzera pane kungova amai ve Serena, Oracene Price, inozivikanwawo sekuti, Brandy Price ndiye aimbova mutambi wemateyheni akadzoka nomudzidzisi uyo akabatsira to achivaka Serena Williams tennis ruzivo. Akaparadzaniswa naRichard muC2002 pamusoro pemhosva dzechisimba chemhuri.
Sisters: Venus Williams ndiye hanzvadzi yechikuru ye Serena, iyewo tennis nyanzvi. Akatanga basa rake reTennis pamwe chete naSerena uye vakagara kuburikidza nehupamhi uye hunyoro hwebasa ravo pamwe chete kubva panguva yapfuura.
Yetunde Price, akwegura 31, mumwe wehanzvadzi yaSerena. Akafira musi wa 14th waSeptember 2003 kubva pfuti mavanga anotsigirwa nekuda kweD Drive-Shooting muUnited States. aive, asati afa, Muiti Wemubatsiri weSerna naVenus, mukoti akanyoreswa pamwe chete nemuridzi wekodhoni.
Chinyanyozivikanwa pamusoro peimwe hanzvadzi yaSerena, Isha Price, Lyndrea Price kusanganisira hama dzake dzeropa Richard Williams III, uye Dylan Starr Williams.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Haisi Kungoti Genius Chete
Funga nezvemaikadzi vanobudirira vane ruoko mune pie dzose uye iwe unogona kunge usisiri kure nekufungidzira upenyu hwaSerena Williams kunze kwetennis. Kunze kwekuisa mune mamwe mafirimu uye zviratidzo zveTv kusanganisira Hair Show (Movie) Agent Ross 2004 Street Time (TV Show). iye akaonekwa mune zvakawanda zvekutengeserana nemavhidhiyo emimhanzi.
Mukuwedzera, ane chikwangwani chokuunganidza zvishongo uye mabhegi anotengeswa pamusha wekutengesa HSN. Chii chimwe? iye muchengeti wemudzimai weMiami Dolphins NFL team uye UFC uye mubatsiri wezvikwata zvekare zvinonziwo mazita emumiririri wechibvumirano.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Serena aiva mutambi wemukadzi akakurudzirwa zvikuru mu2016 uye mu2017.
Anongova nemwedzi gumi namashanu akwegura kupfuura hanzvadzi yake Venus
Basa raanofarira mitambo kunze kweTennis ndiro Gymnastics
Akanga akavakwa zvakanaka kunyange semwana weA3 wemakore. Maererano nehanzvadzi yake Lyndera:
Kunyange semwana, Serena yakavakwa. Akanga ari muscular. Akanga asingafaniri kuita basa rakawanda kuti awane muviri uyu. Icho chaiva chiremera chakanga chaine zvipo pazera remakore 3 kuti ave nomuviri iwoyo. Ndinoyeuka ndichifunga, tarisai kusvikira vawana mutoro wenyu.
Akangofa akafa nematambudziko pashure pokunge aberekwa mwanasikana wake wokutanga. Achirondedzera zvakaitika kwaari mubvunzurudzo neCNN Serena Williams Inoti:
"Ndakapotsa ndafa mushure mokubereka mwanasikana wangu, Olympia. Kutanga, ma-C-chikamu chikamu chakasununguka chakavharika nekuda kwekukanganiswa kwakanyanya ndakatsungirira semugumisiro wekubolism. Ndakadzokera kuvhiyiwa, uko vanachiremba vakawana hematoma huru, kurira kweropa rakavhara, mudumbu mangu. Uyezve ndakadzokera kubasa rekushandira kuitira nzira inodzivirira kuputika kuenda kumapapu angu. "
Chokwadi Check: Vongai nekuverenga kwedu Serena Williams Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!